Google Optimize Kutangisa kweVashambadzi Kwekuyedza | Martech Zone
Google Optimize yatanga mu beta kuboka rakashoma revashandisi. Ini ndakakwanisa kusaina uye ndikafamba-kekuno kuchikuva nhasi uye zvese zvandingati - wow. Pane zvikonzero zvitatu nei ndichifunga kuti izvi zvichave kukanganisa kukuru mumusika wekuyedza. Muchokwadi, dai ndaive chikuva chekuyedza, ndinogona kunge ndiri kubuda izvozvi.
The user interface inoenderana nemamwe mapuratifomu seGoogle Tag Manager uye Google Analytics, saka kana iwe wakamboshandisa iwo mapuratifomu iwe unowana uchifamba uchienda kuGoogle Optimize mhepo.
Ipuratifomu yakavakwa mushe Google Analytics, inoita kuti iwe ugone kushandisa yako iripo Google Analytics saiti dhata kukurumidza uye nyore kuona nzvimbo dzesaiti yako dzinogona kuvandudzwa pamusoro.
Ndizvo vakasununguka. Kune mamwe maficha anowanikwa neGoogle Optimize 360 ​​- sekutarisa kwevateereri, kuyera kusingagumi multivariate, Ad hoc kuyedza zvinangwa, kumberi kumwekuyedza kuyedza kugona, kuita mabasa, zvibvumirano zvedanho rebasa.
Sezvazvakaita nemamwe ese ekugadzirisa uye ekuyedza mapuratifomu, Google Optimize inoshandisa yepamusoro manhamba ekufananidzira, uye Bayesian manhamba nzira yekuenzanisira kuedza kwako. Google Optimize inoshandisa maturusi akaomesesa ekumisikidza senge yepamusoro yekuedza kunongedzera kukurega iwe utumidze ruzivo rwakakodzera kune vatengi vako panguva yakafanira.
Iwe unogona kumisikidza iyo A / B bvunzo, Multivariate Bvunzo, kana Redirect Bvunzo:
Iyo chikuva inoda Google Chrome uye a Google Ongorora kuwedzerwa kumisikidzwa… asi nechikonzero chakanaka. Panzvimbo pekunge wabira yako nzira kuburikidza nekodhi uye peji zvinhu, iyo yekuwedzera inokutendera iwe kungo dhonza uye kugadzirisa zvinhu sezvazvinodiwa.
Ndiko kugadziriswazve kwedu Sangano resaiti rakavakirwa pane WordPress ine vhidhiyo kumashure ... uye hapana nyaya chero zvipi uchishandisa Google Optimize! Ive neshuwa yekusaina!
Kumhan'ara kunopa zvese mhedzisiro uye zvakadzama kuongororwa kwezvese zviedzo zvako.
Saina kuGoogle Kugadziridza
Tags: ab testkuedzagoogle optimizergoogle kuyedzamultivariate kuyedzaoptimizationsaiti kuyedzwayokuedzwa
chingori chinyorwa: I “Google Optimize”, kwete “Google Optimizer” - ungangoda kuzvigadzirisa.
Zvita 3, 2016 na9:25 PM
Kubata kukuru Christoph! Ndatenda!